Andro: 2 Janoary 2020
Marmaray dia manisy rakitsoratra miaraka amin'ireo mpandeha 500
Cahit Turhan Minisitry ny fitaterana sy ny fotodrafitrasa, ny fitaterana TCDD izay tantanan'i Marmaray ao an-tanàna dia manome fahafinaretana tsara ny fitateram-bahoaka any Istanbul, YHT ary fiaran-dalamby hafa, izay mamela ny fandalovan'i Eropa. Loharano fisarahana-Kazlıçeşme [More ...]
Torkia Transit lalovan'ny Corridor Lasa Tonga
Fitaterana sy ny Fotodrafitrasa Minisitra Cahit Turhan, lehibe lalamby tamin'ny 2019 avy amin'ny fandaharam-potoana ny Torkia dia iray amin'ireo voalohany fitaterana fiaran-dalamby avy any Shina an'i Eoropa maneho no arahina, Marmaray sy Baku-Tbilisi-Kars lalamby [More ...]
Fitaterana sy ny Fotodrafitrasa Minisitra Cahit Turhan, miaraka Azia maha lehibe eo amin'ny fitaterana lalantsara Eoropa ka nanao Torkia mikendry ny endrika ho fitaovana fototra. Miaraka amin'ny famatsiam-bola ho laharam-pahamehana amin'ny lalamby ao anatin'ny sehatry ny drafitry Master Master. [More ...]
Cahit Turhan Minisitry ny fitaterana sy ny fotodrafitrasa, ny fiaran-dalamby haingam-pandeha vaovao (YHT) apetraka, dia tokony ho hahatratra 2020 ny isan'ireo mpandeha isan-taona rehefa tonga ny ampahefatry ny taona 30, hoy izy. Turhan, TCDD Transportation Inc. [More ...]
Kart54, izay manome fitaterana haingana sy mora ary azo atokisana amin'ny Sakarians avy amin'ny Kaomina Metropolitan, dia nahazo olona 2019-47 kokoa tamin'ny taona 639; nihoatra ny 15 tapitrisa ny isan'ny fampiasana nandritra ny taona. Sakarya [More ...]
Fijanonan'ny bus kocaeli Intercity dia nanompo olona an-tapitrisany tao anatin'ny herintaona
Kocaeli Intercity Bus Terminal no lasa safidy voalohany tamin'ny olom-pirenena tamin'ny fitaterana an-tsehatra taorian'ny fanavaozana farany nataon'ny Kraisialy Metropolitan. Mpandeha, ary koa ireo te-hitsidika, mandefa miaramila, mandany fotoana ao amin'ny kafe sy [More ...]
DEMAR, izay an'ny koperativa napetraky ny mpiasan'ny lalamby no nakatona. Toerana Toy izany koa no hanome anareo ny fanompoana manokana tsena any Torkia Wagon Industry A.Ş. (TÜVASAŞ) ny lalamby Mpiasa Union mpikambana nokarakaraina tamin'ny 1983, dia nametraka VY SSI Consumer Cooperative [More ...]
Voarara ny miandry ny mpandeha mitondra sora-baventy eo amin'ny seranam-piaramanidina Istanbul. Hisy faritra vaovao hamboarina ho fandraisana ny mpandeha. Ismail Sanli, Mpanara-maso ny administratera isam-paritra Istanbul dia nahazo vaomiera miaro [More ...]
Yenikapı Hacıosman Metro Amin'ny 8 Asabotsy
Ny Kaominina Metropolitan Istanbul dia hanompo ao amin'ny zotra M2 Yenikapı - Hacıosman amin'ny asabotsy miaraka amin'ny lamasinina 8 amin'ny Asabotsy. Na ny tahan'ny mpandeha aza dia hitombo 33 isan-jato. Metro, sampana iray ao amin'ny Distrikan'ny Metropolitan Istanbul (IMM) [More ...]
Sazy an-tapitrisany TL 1 tapitrisa ho an'ny helok'ny fandefasana fandotoana an'i Izmit ao anatin'ny 13 taona
Kocaeli Metropolitan Munisipalin'ny Departemantan'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny ekipa mpanara-maso ny fizahana, dia tsy nanome làlana fandotoana tao Izmit Bay. Ny ekipa miasa 7 ora isan'andro, 24 andro isan-kerinandro, sambo 2019 amin'ny 13 [More ...]
I Tünektepe Teleferik dia nitondra olona 2019 500 ho any an-tampony tamin'ny taona XNUMX
Antalya Metropolitan munisipaly ANET A.Ş. Tünektepe Teleferik Facility, Sarısu sy Topçam fialam-boly, Kadınlar Plajı ary Zıp Zıp Park, izay naterak'i Çalık Holding, nanaparitaka rakitsary mpitsidika tamin'ny taona 2019. Fitaovana mandritra ny taona [More ...]
Lalao Ski maimaimpoana ao amin'ny Resort Danizka ao Denizli
Denizli Metropolitan Munisipaly, izay manetsika ny fahafahana rehetra hanao asa fanatanjahantena manomboka 7 ka hatramin'ny 70 ao Denizli, dia manomboka tohatra ski maimaimpoana ao amin'ny Centre Ski Denizli izay lasa ivon-toeran'ny fizahan-tany ririnina. Tanànan'i Metropolitan Denizli, [More ...]
Denizli Cable Car sy Bağbaşı Plateau dia nampiantrano olona 5.500 XNUMX tamin'ny andro voalohan'ny taom-baovao
Tamin'ny andro voalohan'ny taona 2020 dia nihazakazaka nankany amin'ny zotram-piakarana Denizli Cable Car ny Baizbaşı Plateau ny mponina tamin'ny andron'ny 1500 ary nisy rakotra fotsy. Bağbaşı Plateau dia feno olom-pirenena maniry ny hiaina ny hafaliana amin'ny ranomandry amin'ny andro voalohany amin'ny Taom-baovao [More ...]